Sinaan la'aanta waxbarashada iyo bulshada ee daran | Dhaqaalaha
Shantii carruur ahba mid baa ku nool fakhri
Jose Manuel Vargas sawir-haye | | Noticias
Sinnaan la'aanta bulshada iyo dhaqaalaha ee Scotland waxay si qoto dheer ugu xididantahay nidaamka waxbarashada iyo bulshada guud ahaan. Mid ka mid ah shantii carruur ah ee reer Scotland ah ayaa ku nool faqri. Dhibaatooyinka kuwan haysta caruurta saboolka ah way muuqdaan durba markay yaryihiin waxayna sii xoogeysanayaan inta lagu jiro waxbarashada aasaasiga iyo dugsiga sare.
Un waxbarashada waxbarashada ee Scotland waxay xaqiijineysaa in seddaxda sano ereyada ereyadan yar yar ee faqiirnimada ku nool ay aad uga yar yihiin tan carruurta ka soo jeeda qoysaska dakhligoodu sarreeyo. Shanta sano farqiga ereybixintu wuxuu u dhigmaa ilaa saddex iyo toban bilood. Dhamaadka waxbarashada khasabka ah, bulshada ka faa'iideysiga badan waxay leeyihiin fursad aad u fiican oo ay ku gaaraan jaamacad, maadaama xarumihii hore ee waxbarashada ay weli ku jiraan waxyaabo badan oo bulshada ku kala duwan.
In badan oo ka mid ah hogaaminta daraasadaha waxbarashada ee Scotland waxay cadeyneysaa in dhalinyarada la nool qoysaska dakhligoodu sarreeyo ay shan jeer uga badan tahay inay galaan jaamacad marka loo eego wiilasha ka soo jeeda xaafadaha iyo meelaha aadka u liita. Ku Jaamacadaha Scotland Waxay martigeliyaan 40% ardaydooda iskuulada gaarka loo leeyahay, taas oo kaliya u adeegta 5% wadarta guud ee ardayda iskuulada Scotland.
Yaraynta farqigaani ma aheyn mudnaanta siyaasada bulshada sanadihii ugu dambeeyay Scotland (England, tusaale ahaan, wey yareysay). Dhammaan barnaamijyadii ku dhammaaday si guul leh waxay lahaayeen maalgelin badan oo iyaga ka dambeysa, hase yeeshe, mas'uuliyiinta Scottishku waxay kaliya u nisbeeyeen 5% miisaaniyadda cilladaha bulshada, ugu yar inay gutaan waajibaadkooda sharci.
Muddo dhawr sano ah hadda, xisbiyada mucaaradka ugu waaweyni way dagaallamayeen si kan cusub manhajka scotland waxay horumarin kartaa natiijooyinka waxbarasho ee carruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ah. Marka la eego aftida madaxbanaanida waxaas oo dhan waxay keeneysaa su'aalo muhiim ah oo ku saabsan waxa laga qaban karo si wax looga qabto dhibaatada sii kordheysa ee sinaan la'aanta bulshada iyo dhaqaalaha ee ka muuqata Scotland.
Sinnaan la'aanta waxbarashadu waxay dhibaato weyn ku noqon doontaa Iskotishka aftida ka dib. Iyo, sidaa darteed, qaybsiga kheyraadka waa mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee ay dowladda sii wadi doonto inay wajaho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Noticias » Shantii carruur ahba mid baa ku nool fakhri
Shaqo la’aan, dhibaatada weyn ee ka jirta Talyaaniga
Canshuurta Tobin-ka ayaa khatar ku ah Spain